Achawlaymyar - Page 206 of 213 - News and Media
ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ အဖိုးနဲ့ အဖွားကိုမှ လုပ်ရက်လိုက်တာ . . .
June 3, 2020 by Achawlaymyar
နံနက် ၆း၀၀ ခန့်မှာ အင်းလေးနယ် မှ ရှမ်တိုင်းရင်းသား ဖိုးဖိုးဖွားဖွား ၇၅ နှစ်ဟာ မ န္တ လေး ဆေးရုံကြီး၌ဆေးကုသရန် ရောက်လာရာ လူလိမ်တယောက်ဟာရိုးသားတဲ့ အဖိုးအဖွားတို့အား အတင်းဝင်ရောပြီး လူနာလာမေးသူ တနယ်သားခြင်း အသွင်ဖြင့် အဖိုးအား လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ခေါ်ထုတ်သွားပြီးခဏကြာတော့ အဖွားဆီသို့ ရောက်လာပြီးနောက် အဖိုးကပိုက်ဆံအိတ်တောင်းခိုင်းကြောင်း ပြောဆိုပြီး လိမ်လည်ယူဆောင်သွားရာ ၎င်းအိတ်ထဲတွင် ဖုန်း မှတ်ပုံတင် ငွေပါသွားကြောင်း သိရပါတယ် သားသမီးတွေဆီ ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုံးနံပါတ် မသိပါ၍ ၎င်း မှတ်ပုံတင်ဖြင့် ငွေလွှဲခိုင်းမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း အဖွား က ပြောပါသည် သို့ပါ၍ ဖိုးဖိုး ဖွားဖွားကို သိရှိပါက သားသမီးများသိအောင် ဆက်သွယ်ပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ခရက်ဒစ် သတင်းရွာ unicode version နံနကျ … Read more
မုန်း၍ လည်းကျိန်စာ မတိုက်နဲ့ ချစ်ခင်၍လည်း နောက် ဘဝပြန်တွေ့ ပါရစေ ဆုမတောင်း ပါနဲ့/
မုန်း၍ လည်းကျိန်စာ မတိုက်နဲ့ ချစ်ခင်၍လည်း နောက် ဘဝပြန်တွေ့ ပါရစေ ဆုမတောင်း ပါနဲ့ ဘယ်သောအခါမှ မုန်း၍လည်း ကျိန်စာ မတိုက်ပါနှင့် ချစ်ခင် ၍လည်း နောက်ဘဝပြန်တွေ့ပါရစေ ဆုမတောင်းကြ ပါနဲ့ ကံ ကံ၏ အကျိုးရယ် သံသရာ ဆိုတာ ကိုရယ် ယုံကြည် သက်ဝင် ကြပါစေ။ ကံမှန် ပါက အကျိုးပေး သန်၏ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူ အဟောင်းပါ။ ကံ ကံ၏ အကျိုးပေးတွေပါ။ ပဋာစာရီ လင်ကို မြွေကိုက်၊သားကြီး ရေနစ်၊သားငယ် စွန်ချီ၊ မိဘနှစ်ပါး နှင့် အကိုကြီး လေပြင်း မုန်တိုင်းကြောင့်ဆုံးရှုံး အဝတ်အစားမဲ့ အောင်ရူးခဲ့ ရတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ နှင့် တွေ့တော့ ချစ်သမီး ဒီပွဲဟာ … Read more
သူ့အပျေါ ကိုယျက တကယျကောငျးရဲ့သားနဲ့ သူက ကိုယျ့အပျေါ နညျးနညျးလေးမှ ကောငျးမလာဘူး ဆိုရငျ
ဝဋျကွှေးတဈခုသာ ဖွဈလာရငျ… ကိုယျကောငျးပမေယျ့ သူမကောငျးတာ”ဝဋျ”ကွောငျ့ပါ သူ့အပျေါ ကိုယျက တကယျကောငျးရဲ့သားနဲ့ သူကကိုယျ့အပျေါ နညျးနညျးလေးမှ ကောငျးမလာဘူးဆိုရငျ ကိုယျ့မှာ ဝဋျကွှေး ရှိနပွေီဆိုတာ သခြောပါတယျ …။ သူ့ကို ကိုယျက ဘာမှ အပွဈလညျးမပွော ကိုယျလုပျထားတဲ့ အပွဈတှေ ဘာမှလညျးမရှိဘဲနဲ့ ကိုယျ့ကိုသူက အပွဈပဲ အမွဲပွောနပွေီဆိုရငျသခြောတယျ ကိုယျ့မှာ ဝဋျကွှေး ရှိနပွေီဆိုတာ …။ ကိုယျ့ကလညျး သူ့ကိုတဈခါမှ မမုနျးရပါဘဲ ဘာမှနျးညာမှနျးမသိဘဲ သူ့ဆီမှာ.. ကိုယျအမုနျးခံနရေပွီဆိုရငျ သခြောတယျ။ ကိုယျ့မှာ အမှနျတကယျဝဋျကွှေး ရှိနပွေီဆိုတာ …။ ဝဋျကွှေးရှိရငျ ကိုယျမလုပျပမေယျ့ ကိုယျလုပျတယျလို့ အထငျခံရတတျတယျ။ ကိုယျမပွောပမေယျ့ ကိုယျပွောတယျလို့ အထငျခံရတတျတယျ။ကောငျးတာလုပျတဲ့အခါလညျး ကောငျးတယျလို့တဈခြို့လူတှမေမွငျကွဘူး။ ဝဋျဆိုတာ ဆပျမှ ကမြေယျ။ ဆုတောငျးနရေုံဖွငျ့ ဝဋျကုနျသှားမှာ မဟုတျပါဘူး …။ … Read more
မိမိ မွေးနေ့ရောက်တိုင်း ဒီလိုလေး လုပ်ပါ မွေးနေ့ရောက်တိုင်း ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ပါ (၁၈) ရက် ကျင့် စဉ် ထူး မိမိတို့မွေးနေ့မှစ၍ (၁၈)ရက်တိုင်တိုင် ကျင့်ဆောင်ရပါမည်။ မိမိတို့မွေးနေ့တွင်ကြေးဖလားနှင့်ဖြစ်စေ ငွေဖလားနှင့်ဖြစ်စေ ရေသန့်သန့်ထဲ့ပြီး သပြေပန်းများလှုဒါန်းထားပါ ။ ရေကိုနေ့စဉ် နေထွက်စဉ် အချိန်တိုင်း လဲလှယ် ပေး ပါ ။ ပန်းညှိုးလျှင် အသစ်လှု ဒါန်းပေးပါ။ ရေလဲ ပန်းလဲ လှုဒါန်း ပြီး ချိန် တိုင်း အောက်ပါဂါထာအား (၉)ခေါက်ရွတ်ဖတ် ပါ ” ဣဒ္ဓိ မန္တောစယေဒေဝါ ဝသန္တာ ဣဓသော သနေ တေ ပိ အမှေ နုရက္ခန္တု အရောဂေန သုခေန စ ” အနက် မှာ…n … Read more
June 2, 2020 by Achawlaymyar
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မ လေး အချစ် စုံတွဲ ရှိခဲ့ကြတယ် ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ကြိုက် လာ ကြတာ သက်တမ်း သုံးနှစ် ပြည့်တဲ့ အခါ လက်ထပ်ကြ တော့မယ် ဆိုပြီး မင်္ဂလာရက် တစ်ရက် ရွေးချယ် သတ်မှတ် လိုက်တယ် ။ ကောင်လေးက တော့ ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းမယ့် သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာရက်လေးကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပျော်နေရှာတာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ မင်္ဂလာဆောင်မယ့်နေ့ မ ရောက်ခင်မှာပဲ သူ့ချစ်သူ ကောင်မ လေးက တခြားကောင်လေး တ ယောက် နဲ့ မ မျှော် လင့်ဘဲ လက်ထပ် သွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကောင်လေး … Read more
ပထမလူပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယ လူပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးဆိုတာ ထားတဲ့ လူအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်
ပထမလူပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယ လူပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးဆိုတာ ထားတဲ့ လူအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်…… သင့်ကို ချစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့လူထက်သင့်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ လူရဲ့ဘဝထဲမှာပဲ ရှင်သန်လိုက်ပါ……. သင့်ကို ချစ်တဲ့ လူထက်သင့် အကြောင်းကို အပြည့်အဝနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ လူကသာသင့် ဘဝအတွက် အလိုအပ်ဆုးံ လူပါ…… ယောက်ကျားပဲ ဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရာရာ အပေါ်နားလည်မူနဲ့ ပထမလူရယ်ဒုတိယ လူရယ်လို့ မခွဲခြားပဲသင့် လက်ထဲ ရောက်တဲ့ အရာတိုင်းကသင် ပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်သင် တန်ဖိုးထားတဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဖိုးက​တော့ ရှိနေမှာပါ…… crd ======= ပထမလူပဲ ဖှစဖြှစဒြုတိယ လူပဲဖှစဖြှစ တြနဖြိုးဆိုတာ ထားတဲ့ လူအပေါမြှာပဲမူတညပြါတယြ…… သငြ့ကို ခစွပြါတယြ ဆိုတဲ့လူထကသြငြ့ကို တနဖြိုးထားတဲ့ လူရဲ့ဘဝထဲမှာပဲ ရှငသြနလြိုကပြါ……. သငြ့ကို ခစွတြဲ့ လူထကသြငြ့ အကှောငြးကို … Read more
မကျြနှာပျေါက တငျးတိပျတှကေို ပြောကျကငျးစမေယျ့ အိမျတှငျး နညျးလမျးမြာ တငျးတိပျ ဆိုတာ အရပွေားပျေါမှာ တှရေ့တတျတဲ့ အညိုရောငျ အစကျအပြောကျမြား ဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျ အရပွေား ပညာရှငျမြား အဖှဲ့ရဲ့ အဆိုအရ ၎င်းငျးဟာ အသားအရေ ပကျြစီးခွငျး လက်ခဏာ ဖွဈပါတယျ။ တငျးတိပျ ဖွဈရခွငျး အကွောငျးအရငျးမြား ကတော့ နရေောငျ အလှနျအကြှံ ထိတှခွေ့ငျး၊ မြိုးရိုး၊ ဟျောမုနျး မညီမြှမှု တို့ကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ တငျးတိပျတှကေ မကျြနှာတငျမှာ သာမက ခန်ဓာကိုယျ နရော အနှံ့ အပွားမှာ ဖွဈပျေါတတျ ပါတယျ။ တငျးတိပျတှကေို ဖယျရှားဖို့ အထူးကုသမှုတှေ ရှိပမေယျ့ ဈေးအလှနျကွီး ပါတယျ။ ယငျးတငျးတိပျ မြားကို အိမျမှာ နရေငျး သဘာဝ ကုထုံးတှနေဲ့ … Read more
အင်မတန် ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမျက်နှာဘုရား တည်ရှိရာ နေရာ။
ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းများနှင့်ထူးခြားသောဗိသုကာလက်ရာ များဖြင့် တည်ထားသောတောင်ထိပ်‌ပေါ် ဘုရားကျောင်းဆောင်လေးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ သာမန်ထက်ပိုပြီး တရားအားထုတ် ဖို့အတွက် နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဘက် Tambon Khaem Son ဒေသ အလယ်ပိုင်းတွင်ရှိသော Wat Pha Sorn Kaewဗိမာန် သည်ဘုန်းတော်ကြီးများ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအားထုတ်သူများ အတွက်ဓမ္မ ဆိတ်ငြိမ်ရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တရားဟောပြောရန်အတွက် ခန်းမ ၊ စေတီ နှင့် ပန်းဥယျာဉ်များပတ်ပတ်လည် ရှိသော တောင်ထိပ်ဘုရား‌ကျောင်း စေတီသည် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်း‌လောက်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ဆောက်လုပ်ထား ပြီး အသစ်ဆန်း ဗိသုကာလက်ရာများဖြင့် ပုံဖော်ထားသောနေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Khao Kho ဒေသရဲ့တည်နေရာကို‌ ရွေး ချယ်လိုက်ခြင်းဟာ သဘာဝတောတောင် အလှများဖြင့် တရားဘာဝနာ ကျင့်ဖို့ နေရာကောင်းတခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စိမ်းလန်းသောတောတောင်တန်း၏ အေးချမ်းတိတ်ငြိမ် မှုနှင့် အညီ … Read more
ဒီလောကကြီးမှာ … လူသားမဆန်ကြတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိတယ် …
ဒီလောကကြီးမှာ … လူသားမဆန်ကြတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိတယ် … မနေ့ထဲက ကိုနန္ဒကျော်စွာ ရဲ့ သတင်းလေးတွေ့လို့စောင့်ကြည့်နေတာ။ ခုသေသွားပြီးဆိုတော့လဲ ဝဋ်ကျွတ်သွားတယ်လို့ပဲ မှတ်ရတော့မှာပေါ့။မနေ့တုန်းက သထုံမြို့ သထုံဘူတာအနီးမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဘေးတွဲတစ်စီးက လာပစ်သွားတာပါ။ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ အဖွဲ့တွေက လိုအပ်တာတွေ စီစဉ်ပေးပြီး ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုခံယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးခဲ့ကြပေမဲ့ သေဆုံးသွားပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခု သထုံဆေးရုံမှ သုသန်တွင်မြေချနိုင်ရန်စီစဉ်နေပါသည်။နောက်ဆုံးအချိန်စောင့်ရှောက်ပေးသော သထုံခရိုင်ဆေးရုံမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီးနှင့် ဆရာဆရာမဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ စဉ်းစားနေတာက လာစွန့်ပစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ဘေးတွဲက လူတွေကိုပါ။ ငါ့လက်ကလွတ် ကျွတ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ အမေရိကန်မှာ လူသားတွေရဲ့ အသက်တချောင်းချင်းစီအလိုက်တန်ဖိုးထားကြတယ်။ ခုလဲ လူမဲတယောက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးစဉ် လည်ပင်းကို ဒူးနဲ့ထောက်ထားတာအသက်ရှုကြပ်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်နေတယ်။ အိမ်ဖြူ တော်လို … Read more
မျက်နှာပေါ်က အမာရွတ်တွေနဲ့ အမည်းစက်တွေရှိလျှင် ဂျင်းကို ဒီလိုအသုံးပြုပါ ../
ဂငျြးက အစာအိမျအတှကျ အထူးကောငျးမှနျသလို တခွားကနျြးမာရေးအတှကျလညျး ဆေးတဈလကျ အနနေဲ့ အသုံးပွုလို့ ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အလှအပအတှကျလညျး အသုံးဝငျပါသေးတယျနျော.မကျြနှာပျေါက အမာရှတျတှနေဲ့ အမညျးစကျတှအေတှကျ ဂငျြးကိုအသုံးပွုနညျး (၁) ဂငျြးဟာ မကျြနှာပျေါကအာရှတျတှေ အညဈအကွေးတှကေို သနျ့စငျပေးနိုငျပါတယျ။ အမာရှတျရှိတဲ့နရောမှာ ဂငျြးကို ပါးပါးလှီးပွီး ကပျထားပေးပါ။ ဂငျြးခွောကျသှားတဲ့ထိ ထားပါ။ တဈနကေို့ တဈကွိမျလောကျ လုပျပေးပါ။ လအနညျးငယျဆို သိသာပါလိမျ့မယျ။ နညျးလမျး (၂) ဂငျြးကို တောကျတောကျစဉျး (သို့) အမှုနျ့ကွိတျထားတဲ့ ဂငျြးကိုယူပါ။ ပွီးရငျ သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီးကို အနညျးငယျ အရညျညှဈပါ။ ပြားရညျထညျ့ပါ။ သခြောမှပွေီးရငျ မကျြနှာပျေါမှာလိမျးပေးပါ။ မိနဈ ၃၀ လောကျထားပွီး ရဆေေးခပြါ။ တဈပတျကို ၂ ခါလောကျလုပျပါ။ အသားအရေ ကွညျလငျပွီး … Read more
← Previous Page1 … Page205 Page206 Page207 … Page213 Next →